Niafara Tamin’ny Gidragidra Ny Lalao Baolina Kitra Tao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2012 3:18 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Español, 日本語, English
Araka ny filazan'ny Federasion'ny Lalao Baolina Kitra Tajikistan [ru], nampisafoaka ireo mpilalao vahiny avy amin'ny Energetic ny fitovizan'ny isa ka nihevitra izy ireo fa tokony tsy ekena ilay baolina tafiditra. Rehefa avy nandroaka ireo mpilalao roa vahiny noho ny “fitondrantena tsy mendrika” ny mpitsara, dia nanaovan'ireo mpilalao marobe angaredona avy eo. Nivadika gidragidra avy eo ny zava-nitranga satria niditra an-tsehatra ireo mpanohana ny roa tonta ka savoritaka tanteraka avy eo rehefa nirohotra tao amin'ny kianja ny vahoakan'i Istaravshan. Voatery nahemotry ny tompon'andraikitry ny baolina kitra arak'izany ny lalao.
Jasur Ashurov (@jashurov) nisioka hoe [ru]:
@jashurov: Tena lalao Baolina Kitra ny tao Tajikistan fa tsy lalao baolina kitra tsotra fotsiny… Tahaka ny hoe mpilalao ady totohondry no nalefan'izy ireo tao fa tsy mpilalao baolina kitra nandritra ny fifaninanana. Mahamenatra!
@jashurov: Farafaharatsiny, mba mahafantatra tsara ny mpitsarantsika fa tsy tokony hanome tombony mpilalao. Amin'ny lalao baolina kitra, ny vahoaka no manafay anao amin'izany!
Bilaogera Beparvo nanoratra [ru] hoe:
Manala-baraka ny Tajikistana rehetra izany. Na dia tsy nisy aza izany, faritan'izao tontolo izao tahaka ny borosindoko sy fandalorana isika, ary ankehitriny, mbola manala-baraka ny tenantsika ihany isika. Nahoana no niafara tamin'izao korontana izao ny lalao amin'ny Ligy ambony? Nahoana ireo mpilalao baolina kitra no mihevitra fa azo ekena ny karazam-pitondrantena tahaka izao? Tsy azoko hoe nahoana ny polisy no tsy mba nirotsaka an-tsehatra.
Ho famaliana ny lahatsoratr'ilay bilaogera, Rishdor naneho-hevitra hoe [ru]:
Mpisera hafa, Isfandiyor Zarafshoni kosa tsy niombon-kevitra [ru] tamin'izany:
Mpiserasera sasany nihevitra fa mahatonga ny lalao baolina kitra Tadjika ho be mpankafy hatrany ny zava-doza nitranga farany teo. Tomiris (@tomiristj), ohatra, nisioka hoe [ru]:
@tomiristj: Ankehitriny, ho lasa tena fialamboly ny lalao baolina kitrantsika:). Hoavy hanatrika ny lalao baolina kitra avokoa ny rehetra raha mitranga ao foana ny loza tahaka izany .